Mid Kamid ah Wariyayaasha Muqdisho Oo Xalay Dhaawac Halis ah loo Geystay.(Hadhwanaagnews) Saturday, June 09, 2012 Muqdisho-(HWN)- waxaa xalay gudaha magaalada Muqdisho dhaawac halis ah loogu geystay mid kamid ah Wariyayaasha ka howl gala gudaha Muqdisho Muqdisho-(HWN)- waxaa xalay gudaha magaalada Muqdisho dhaawac halis ah loogu geystay mid kamid ah Wariyayaasha ka howl gala gudaha Muqdisho kuwaasi oo ay ugeysteen kooxo dablay oo aan heebtooda lagaran .
Wariye Maxamed Shariifka oo iminka dhaawac ah
Wariyaha dhaawac halista ah loo geystay ayaa lagu magacaaba Wariye Maxamed Shariif kaasi oo ka howl gala idaacada Barkulan ee fadhigeedu yahay Magalad Nairibi balse xarun ku leh Muqdishio waxaana ku dhacday labo xabadood oo uga dhacday qeybaha sare ee jirka.
face=Calibri>Kadib markii uu ka soo amba baxay goobtiisii shaqo kuna siijeeday hoygiisa ayaa xaafada Xamar jajab ee magaalada Muqdisho ayaa kooxo dablay ah waxaa ay ku dhufteen ilaa iyo laba xabadood taasi oo uga dhuftay dhabarka iyo beerkayaraha .
Durbaba Wariye shariifka waxaa loola soo cararay isbitaalka Madiina ee Magaalada Muqdisho kaasi oo ilaa iyo hada lala tacaalayo xaaladiisa Caafimaad.
Warar iminka ka soo baxaya isbitaalka Madiina ayaa sheegya in Wariyaha qaliin lagu sameeyay lagana Soo saaray mid kamid ah xabadihii lagu dhuftay kaasi oo laga soo baxshay beerkayaraha xaaladiisana cafimaadn ay ka soo reyneyso.
Macada ilaa iyo hada cida dhaawaca ugeystay Wariye Maxamed Shariif oo ka howl galayay idaacada barkulan waana Wariyihii Labaad ee ee xaafada Xamar jajab dhibaato logu geysto iyadoona ay kol hore aheyd markii isla xaafadaasi lagu dilay allaah unaxariisyee Wariye Cabdisalaan Xiis oo ka tirsanaa shaqaalaha Tvga Caalamig ah ee HCTV xarunteeda Muqdisho.
Xasan kuuriya<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />